ဖြိုး အလ်ဝိုင်: ဆရာတော်ဘုရားများ၏ စကားဝိုင်း
ဟုတ်ကဲ့ မတွေ့ရတာကြာလို့ လွမ်းနေလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်....ဒါကြောင့် လာရောက်ဖတ်ရှုကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များကို ဟာသရွှင်ဆေးတိုက်ကျွေးချင်ပါတယ်....ကျတော်ပထမက စာတော်ဘုရားများ၏ စကားဝိုင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်....အခုတော့ ဆရာတော်ဘုရားများရဲ့ စကားဝိုင်း ပတ်တူးပေါ့နော်....ပျော်စရာလေးလည်း ဖြစ်သွားရတာပေါ့နော်....ပတ်ဝမ်းမှာတုန်းကတော့ အရမ်းရိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်...အဲဒီအတွက် ပတ်တူးကို အတတ်နိူင်ဆုံး မရိုင်းအောင်လို့ တင်လိုက်ပါတယ်....
ငနာဂတုံးများ ကြွလာသည့်အချိန်တွင် ဤသို့တွေ့မြင်ကြားရတတ်ပါတယ်....
ငနာငတုံးများ၏ ဘော်ဒီဂတ်လူမိုက်များအသံ ........ ဟေ့ကောင်ခွေးသားတွေ လမ်းဖယ်စမ်း ဒီမှာ ဆရာတော်ဘုရားတို့ ကြွလာတယ်....ငါစောက်ကန်လိုက်ရ သွားတွေအကတ်လိုက်ချွတ်သွားမယ်... ဟေ့ ဘေးဖယ်လို့ ပြောနေတာ မကြားဘူးလား သေသွားချင်လို့လား ဟေ့ကောင် မင်းရှေ့ကကောင်ကို စောက်ကန်လိုက်စမ်းကွာ ပြောရဆိုရခက်တဲ့ကောင် ဘုန်းဘုန်းတွေကြွလာတာ မမြင်ဘူးလား....(ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ်တော်ချောလွန်ရာကျမည်...ဘုန်းကြီးကြွလာတာတဲ့ဗျာ လူမိုက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကြွလာတာလို့ မေးယူမည်....စာဖတ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ ဒီလိုကျတော်ပြောတဲ့ အဖြစ်မျိုး မြင်ဖူးကြလား????)
ကပ္ပိယ….. ဆရာတော်ဘုရား ဦးခိုက်လျှောက်တင်လိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အမြဲကြွားလွန်းထုတ်ပြီး ကြွားတတ်သည့် မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုတာ ဘယ်မှာပါလဲ အရှင်ဘုရား
ဥူးဒုက္ခိတ(ရဲဘော်ဟောင်း) ….. အေး ဆရာတော်လည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှက်ကွဲနေရတာ မနည်းတော့ပါဘူး တွေ့ရင် ဒီ့အကြောင်းကိုတော်တော်များများမေးတတ်ကြလွန်းလို့ ဆရာတော်လည်း ရှက်ပြီးသေရတော့မှာပဲ…နောက်ဆုံးတော့ ဆရာတော်ဖြေကြားပေးနိုင်တာကတော့ မြင့်မိုရ်တောင်ကိုကြည့်ချင်ရင် ဘယ်မှာမှ တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့…. ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းကို ကိုင်ပြီး ထောင်ကြည့်မှ တွေ့ရမှာပါလို့ ပဲ ဆရာတော်လည်း ဖြေတတ်တော့တယ်….
ကပ္ပိယ … ဒါဆိုတော့ မြင့်မိုရ်တောင်က ကျမ်းထဲမှာ ရှိပြီး အပြင်မှာ တကယ်မရှိတော့ ရွှီးထားတာပေါ့နော်…
ပရိသတ် …. ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား . ဟားဟား
ဥူးဒုက္ခိတ(ရဲဘော်ဟောင်း) …. ဟဲ့ ဟဲ့ ကပ္ပိယ ရွှီးထားတာလို့ တိုက်ရိုက်မပြောရဘူးကွယ့် အဌာကထာလို့ ပြောရတယ်ကွယ် ရွှီးထားတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် လူတွေဝိုင်းဟားကုန်တော့မှာပေါ့ ဒါကြောင့် စကားလှအောင် အဌာကထာလို့ ပြောရတယ်ကွယ့်
ပရိသတ်… ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား ဟားဟားဟား
ကပ္ပိယ …. ဆရာတော်ဘုရား ငရဲရှစ်ထပ်က တပည့်တော်တို့ နေတဲ့မြေကြီးအောက်မှာ တည်ရှိတယ်လို့ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာ ဖော်ပြထားတယ်နော်…. အရှင်ဘုရား ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လုံးနေတော့ ငရဲရှစ်ထပ်က ဘယ်နားသွားထားရမလဲ အရှင်ဘုရား
ဥူးဘဒ္ဒ န္တိက(ပရုတ်သုတ်ခ)….. အေးကွယ့် ကမ္ဘာကြီးကလုံးနေတော့ ဒို့များကျမ်းထဲကပါရှိတဲ့ ငရဲကို ထားဖို့က နေရာမရှိဘူးလေ …. ပထမကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို အပြားအမှတ်အနေနဲ့ ရွှီးထားလိုက်တာ ဖြစ်ချင်တော့ နည်းပညာက တိုးတက်လာတယ် … ဒီ့အတိုင်းဒို့တွေဆက်ငြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး….နောက်ဆုံး ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီး တို့တွေလည်း အပြစ်လွှတ်အောင် သီဟိုက ငနာရဟန်းနာကို အပြစ်ပုံချလိုက်တော့ပေါ့ကွယ်…. ကမ္ဘာက မသိခင်လေး အမြန်ဆုံး ပြင်ရေးတော့တာပေါ့ကွယ် …. သီဟိုဠ်က ရဟန်းနာက ရွှီးထားတာပါလို့ ပြောလိုက်ရင် လူတွေဟားကုန်ကြတော့မယ်လေ ..ဒါနဲ့ပဲ လူကြားကောင်းအောင် အဌာကထာပါလို့ပဲ ပြောရတော့တာပေါ့ကွယ် ….
ကပ္ပိယ ….. ဒါဆိုတော့ ငရဲပြည်က ရွှီးထားတာပေါ့နော် အဲယောင်လို့ အဌာကထာပေါ့နော်….
ပရိသတ် … ဝါးဟားဟား .. ဝါးဟားဟား …ဟားဟား ခွီးခွီင်္း ခစ်ခစ် ခလု
ကပ္ပိယ ….. ဆရာတော်ဘုရား ဆက်ပြီးလျှောက်ထားမေးလိုသည့်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူငယ်တွေ အမြဲပြောတတ်တဲ့ နတ်ပြည်ကကော အရှင်ဘုရား… နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီး ဘယ်ညာအပါးငါးရာဆိုတော့ လူငယ်တော်တော်များများ စိတ်ဝင်းစားနေကြတယ်ဘုရား ….
ဥူးလောပိတ (ရေလှောင်တမံ)….. အေ့ နတ်ပြည်က ဘယ်မှာလဲလို့ မေးလားရင် ဆရာတော်လည်း ဖြေတတ်ဘူးကွယ့် … နတ်ပြည်ကို လူငယ်တွေစိတ်ဝင်းစားလာအောင် ဆွယ်ရတာပေ့ါကွယ်… ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ကွယ် နတ်သမီးအပါးငါးရာဆိုပြီး ရေးချလိုက်တာကွယ်…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက လူပြည်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို နိုင်နိုင်နင်းမကျွေးနိုင်တာ နတ်ပြည်ရောက်မှပဲ အပြည်ကဲမယ်ဆိုပြီး စိတ်ပါလာအောင် ဆွယ်ရတာပေါ့ကွယ်….
ကပ္ပိယ ….. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတော် နတ်ပြည်မှာ ရောက်သွားတယ်ကောင်တွေက ဖရီးကစ်တွေနဲ့ကြီးပဲတိုးလို့ နတ်ပြည်က နတ်သမီးတွေ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လူပြည်ဆင်းလာပြီး ဖာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်မယ် … ယိုးဒယားနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားက ဖာနိုင်ငံလို့ ကမ္ဘာကသိနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာကအားကျမခံ ဖာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်ဘုရား…..
ပရိသတ် …. ဝါးဟားဟား .. ဝါးဟားဟား … ဟားဟား .. ခွီးခွီး ခစ်ခစ် ခလု
မဟာ ပိန္တိတဘန္တတကုလား ….. အေ့ ဆရာတော်တော့ ဖြေပေးတတ်တာကတော့ နတ်ပြည်ရဲ့သဲလွန်စက မြင့်မိုရ်တောင် …မြင့်မိုရ်တောင်ကို မတွေ့တော့ နတ်ပြည်ကို ဘယ်နားလိုက်ရှားရမှန်း မသိတော့ဘူးကွယ့်…..ဒါ့ကြောင့် ဆရာတော်လည်း ဖြေတတ်တာတော့ နတ်ပြည်ကို တွေ့ချင်ရင် မြင့်မိုရ်တောင်ကို အရင်ရှာပါလို့ ….မြင့်မိုရ်တောင်ကို မတွေ့ရင် နတ်ပြည်ဆိုတာလည်း မရှိဘူးလို့ ဒီလိုပဲ ဖြေတတ်တော့တယ်….မြင့်မိုရ်တောင်က အဌာကထာဆိုရင် နတ်ပြည်ဆိုတာကလည်း ရွှီးထားတာပါလို့ပဲ ဖြေရတော့မှာပဲ…..
ကပ္ပိယ ….ဒါဆိုတော့ ကိုယ်တော်ချောက ပိဋကတ်ကျမ်း ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းတွေကို ရွှီးလွန်းအားကြီးလို့ သိုင်းဝတ္ထူကျမ်းလို့ ပြောတာမမှားဘူးပေါ့နော်
ပရိသတ်…. ဝါးဟားဟား ဝါးဟားဟား …ဟားဟား ခစ်ခစ် ခွီးခွီး ဂလု
တရားနာ ပရိသတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်ကောင်း၊ သူတော်မြတ်တို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာတော်ဘုရားများရဲ့ တရားပွဲက ပြီးဆုံးလို့ နောက်များအခါမှာ လာရောက်တရားနာကြပါလို့ ဖိတ်မန္တကပြုရင် ဒီလိုဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ နောက်တွေ့ကြရအုံးမယ်လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ.်… နောက်များအခါမှလည်း ဒီလိုဟာသများကို စောင့်စားမျှော်လင့်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်….
ယနေ့ လူအများ စောင့်စားမျှော်လင့်နေတဲံ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်း(သိုင်းဝတ္တူ) နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမူထဲမှ ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သော စကားလေးအချို့ ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်.... ယနေ့ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ဆရာတော် ဥူးဒုက္ခိတ (ရဲဘော်ဟောင်း)၊ ဆရာတော် ဥူးဘဒ္ဒ န္တ(ပရုတ်သုတ်ခ)၊ ဆရာတော် ဥူးလောပိတ(ရေလှောင်တမံ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၏ဆွေးနွေးမူများသည် အများသူဌါ ကြားဖူးကြသော ဗုဒ္ဓ၀င်(သိုင်းကျမ်းဝတ္တူ) ရဲ့ ယုံတမ်းစကားများအပေါ် ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်... ဤသို့ပြောစကားများမှာ သူတောင်းစားဂိုဏ်းဝင် ချီးပိုးတိုးဂတုံးဘုန်းကြီးများရဲ့ စကားများကို ပြောဆိုထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်.. ဤစကားများသည် ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းဝတ္တူထဲမှ မရှိဟုငြင်းဆိုပါက စာဖတ်သူပရိသတ်များအနေဖြင့် ဒီဘုန်းကြီးငနာများရဲ့ စကားများကို မလက်ခံသင့်တော့ပေ...
ဥူးဒုက္ခိတ (ရဲဘော်ဟောင်း): ပေါကြောင်ကြောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွ ရသေ့တို့၏ စွန့်ထားသော သုက်သွေးနှင့်တကွသော ကျင်ငယ်ရေကို သောက်ကြသော သမင်မ နှစ်ကောင်တို့၏ ၀မ်း၌ သံကိစ္စ သတို့သားနှင့် ဣသိသိင်္ဂသတို့သား နှစ်ယောက်တို့ ပဋိသန္ဓေနေတယ်တဲ့ သေးသောက်ပြီး ဗိုက်ကြီးတာ ငါအခုမှ တွေ့ဖူးတယ်.. ဟားဟား မဟုတ်မမှန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ တကယ်မှန်ပေတာ...
ကွိုင်ကွိုင်(ကပ္ပိယ): သေးထဲလရည်အကျွင်းအကျန် ပါလာလို့နေမှာပေါ့ ဆရာတော်ရယ်
ပရိသတ်; ၀ါးဟားဟား ဟား---ဟား
ဥူးဘဒ္ဒ န္တ(ပရုတ်သုတ်ခ): ဆရာတော်တို့လည်း ဤသို့ဘဲ နားလည်ပေးရမှာဘဲ... အခု ဆရာတော်ဥူးဒုက္ခိတ (ရဲဘော်ဟောင်း)၊ ပြောတဲ့ စကားကမှ ကျင်ငယ်ရေသောက်လို့ ဗိုက်ကြီးတာနော်.. ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြားဖူးတာကတော့ ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်းဝတ္တူထဲမှ သိုင်းဆရာရသေ့ ရဟန်းနာများဟာ အဘယ်သို့ ကိလေသာကြီးလည်းမကြီးလဲ ဆိုတာ ပြောရအုံးမယ်.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကသာ မ၇ှက်ကြတာ.. အကြောင်းရှိလို့ ပြောရအုံးမယ်...ရဟန်းနာများဟာတဲ့ သူတို့စိတ်နဲ့ ပစ်မှားလိုက်တာနဲ့ အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိကောတဲ့ဗျာ....
ကွိုင်ကွိုင်(ကပ္ပိယ): အဝေးကနေများ ဂွင်းထုရင် သုတ်တွေ့ လွှင့်စင်သွားပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို သွားမှန်တာ ဖြစ်မယ်.. ဆရာတော်...
ပရိသတ်: ၀ါးဟားဟား ဟား---ဟား
ဥူးလောပိတ(ရေလှောင်တမံ): နောက်တစ်ခုက - ဥဒါယီရဟန်း၏ သုက်ရည်လူးသော သင်္ကန်းကို ဘိက္ခုနီမ တဦးက ခံတွင်းဖြင့် စုတ်ယူမျိုစား၍ ကုမာရကဿပ မထေရ်ကို ဖွားမြင်လာသည်ဟူ၍၎င်းင်း သာသနာဝင်ကျမ်းဂန်တို့၌ လာရှိ၏ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ဗိုက်ကြီးကြလဲမှန်းမသိကြဘူးနော်...
ကွိုင်ကွိုင် (ကပ္ပိယ): တရားကျင့်ရင် သြအကြောင်းစဉ်းစားရကနေ သုတ်ပိုးများ သင်္ကန်းမှ တွယ်ညှိကပ်ပါးသွားလို့ ဖြစ်မယ်ဆရာတော်...
ပ၇ိသတ်: ၀ါးဟားဟား ဟား--ဟား
ယနေ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသော ဆရာတော်များအားလုံးနဲ့ ကပ္ပိယ ကိုလည်း ကျွန်တော်(ကိုယ်တော်ချော)မှ ကျေးဇူးတင်၇ှိပါတယ်. စောင့်မျှော်ကြည့်ရူနေကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင် သူတောင်ကောင်းမြတ်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောကြားရင် ဒီနေရာမှာ ဒီလိုဟာသမျိုးကို ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်းဝတ္တူများမှ ဆက်လက်ထုတ်ဖော်သွားမည်ဆိုတဲံ့ ပြောကြားရင် နိဂုံးချုပ်အပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....